यी ३ गुण भएकी महिलालाई मानिन्छ असल महिला ! – Nayabook
यी ३ गुण भएकी महिलालाई मानिन्छ असल महिला !
आचार्य चाणक्य एकदमै बौद्धिक विद्वान थिए। आज पनि उनी उत्कृष्ट विद्वानहरू मध्ये एकका रुपमा परिचित छन्। उनीसँग विभिन्न विषयहरूको गहन समझ मात्र थिएन, अभ्यासमा पनि उनी कुशल थिए। चाणक्यको बारेमा भनिएको छ कि उनलाई हरेक विषयको जानकारी थियो। चाणक्य एक योग्य शिक्षक थिए। चाणक्यले महिलामा हुनुपर्ने केहि गुणहरूको बारेमा बताएका छन् जसले महिलालाई श्रेष्ठ बनाउँछ। थाहा पाउनुहोस् यी गुणहरुका बारेमा
विनम्रता र दया
आचार्य चाणक्यका अनुसार दया र विनम्रता यस्ता दुई चीज हुन् जसको बलमा क्रोध माथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी दुबै गुण भएका महिलालाई असल मानिन्छ। यी गुणले युक्त महिलाले सधैं आदर प्राप्त गर्छिन्। यस्ता महिलाले आफ्नो साथसाथै परिवारको पनि सम्मान बढाउँछन्। यी दुबै गुण भएका महिला समाजमा अरूका लागि उदाहरण हुन्छन्।
धर्म पालना गर्ने महिला
धर्म पालना गर्ने महिलाले कुलाको नाम उच्च गर्छन्। धर्मको अनुसरण गर्ने महिला आदरको योग्य हुन्छिन्। धर्मको अनुसरण गर्ने महिला आफ्नो परिवारलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण समाजलाई पनि सही मार्ग देखाउन सक्षम हुन्छन्। धर्मको पालना गर्ने महिलाले सहि र गलत बीच भिन्नता छुट्ट्याउन सक्छिन्। चाणक्यका अनुसार धर्मलाई पछ्याउने महिला श्रेष्ठ हुन्छन्।
धन संचय गर्ने महिला
धन संचय गर्न सक्ने गुण भएकी महिलाले खराब समयमा आआफ्नो पूरा परिवारको सुरक्षा गर्न सक्छिन्। अधिक खर्च गर्ने महिलाको कारण पूरा परिवारमा समस्या आउन सक्छ। कुनै व्यक्तिलाई आपतकालमा खराब समयबाट बाहिर निकाल्न धनले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारण, महिलाहरुमा धन संचय गर्न सक्ने गुण हुनु आवाश्यक हुन्छ।
ई-मेल:- [email protected]ail.com